ငါးမျှားခြင်း - ၀ါသနာ ~ စန္ဒကူး
ငါးကြော်ကြိုက်တဲ့ ကြောင် said...
ငါးကြော်ကြိုက်လို့ ဒီနေ့ပဲ ကြော်စားနေတာ။
မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ လှမယ့် ပုံ :)
ပြမယ်.ပြလဲ မျက်နှာပါ အပါအ၀င် ၊ကိုယ်.ပုံကို ရဲရဲတင်းတင်းသာပြပါ။
သေသေချာချာဘလော.ရေးနေတဲ.သူတွေဘဲဟာ ၊ ဒီဘလော.ဂ်ကိုဖတ်တော.၊ ဘလော.ဂ်ပိုင်ရှင်ကိုလဲ မြင်ဖူးချင်လာလို.လေ။
ပိုင်ရှင်က မပြခိုင်းလို.ဆိုလဲ နားလည်ပါတယ်။ မြင်ဖူးချင်တာ သပ်သပ်ပါဘဲ။
ကျမကတော. မစနကူးမျက်နှာကို မျက်စိထဲပုံဖော်ကြည်.လို.မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
အဓိက က ကိုယ့်ပုံအကြောင်းရေးတာမဟုတ်လို့ ပုံကို တိုက်ရိုက်ကြီးမပြတာပါ။ ( ရုပ်ဆိုးဆိုး ပိန်ရှည်ရှည်လေးမြင်ယောင် လိုက်)
ဘလော့စရေးကတည်းက မျက်နှာဖော်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူးလို့ ကတိပေး ထားပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ နဲနဲပါသွားတာမျိုးတော့ရှိတယ်..း))))
သူများကိုပုံတင်ခိုင်းတဲ့သူကလဲ anonymous ကြီးနဲ့ပါလား..း)
မျက်နှာဖျက်ထားတာ.. ကိုးရီးယား အန်တီကြီးမို့ပါ.. သူတို့က ငါးမျှားလိုင်စင် နဲ့ မျှားနေကြတာလေ... တရားဝင်လားဘာလားမသိလို့ပါ။
ဒါကြောင့် အရွက်လေးကပ်ထားပေးပြီး မျက်နှာဖျက်ထားတာ..း)
Thanks for sharing KuuKuu.I miss every where in Ottawa.Rideau canal turned into skate ring now.I always enjoyed going into Gatineau especially fall.I did fishing too.In spring,I caught some little shrimps in St.Laurence river .
ငါးကြိုက်ပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်တော့မဖမ်းဖူးဘူး။ မြန်မာဝတ်စုံလေးလှတယ်။
ဟုတ်တယ် နော် အစ်မ ငါးမျှားရတာ စိတ်အပန်းပြေ ဗိုက်လဲ ၀ ..ကန်မဟုတ်ရင် ဒီရေတက်တဲ့ အချိန်ဆိုပို ရတယ်..ေ၇ကျ၇င်တော့ မ၇တော့ဘူး အရင်တုန်း ကျွန်တော်တို့ လဲ ကျောင်းတက်တုန်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သောကြာနေ ညဆိုရင် သွား တညလုံးသွား စနေနေ့ မှပြန်လာတယ် ငါးမ၇တဲ့ နေတွေလဲများပ..၇တော့လဲ အကောင်သေးလို့ ယူမရတာလဲ ပြန်လွှတ်ပေါ့ ခုတော့ မလုပ်တော့ဘူး ငါးတွေ hook ကို မျိုထားတာ ပြန်ဖျုတ်၇တာ ငါးတွေ ကိုကြည့် မခံစားနိုင်တော့လို့သူများတွေ ကတော့ပြောသား ငါးတွေမှာ နာကျင်ခံစားမှု မ၇ှိဘူးလို့ သို့ သော်..
I like that kind of fish, taste similar to Nga Pyay Ma. And also cheap I think around $3.00 in Washington DC area Chinese super market.
လှမှလှ ဟာကို.. ဝါးလုံးပုံတဲ့ ပြောချက်က.. :)
ငါးတော့ တစ်ခါမှ မမျှားဖူးဘူး။
ဒို့ လည်းအလုပ်ထဲမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူနေတုန်းကငါးမျှားတယ်။ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာကိုငါးမျှားချိတ်အမြဲထဲ့ထားတာ။နောက်တော့မှ သူတပါးအသက်သတ်တာထိန်းဘုို့ ကြိုးစားတော့မှမလုပ်တော့တာ။ ငါးရပြီးပြန်လွှတ်တာလည်းလုပ်ချင်ပါဘူး။ကိုယ်ကမျှားကတည်းကစားချင်နေပြီ။ငါးမျှားတဲ့တနေ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကအမြဲအားရင်ဘုရားစာရွတ်နေတဲ့သူကငါးဖြုတ်ပေးတယ်။ ရီလိုက်ကြရတာ။ (လွှတ်ဘို့ မဟုတ်ဘူး စားဘုို့ ..ဟီးဟီး)
ဒါပေမယ့် မကိုင်တတ်လို့ သူများကိုပေးပစ်ရတာ..
ငါးကိုင်ရတာတယ်ခက်သကိုး.. ငါးစိမ်းသည်..ငါးစိမ်းသည်နဲ့ နာမည်သာဆိုတာ သူတို့အလုပ်ပညာသားပါတယ်..း)))
မြတ်ကြည်ရေ.. တကယ်ဝါးလုံးပါ.. ၀ါးလုံးတောင်မှ ၆ ပေနီးပါး ၀ါးလုံးရှည်..း))
ကိုယ်လုံးလေးကမိုက်တယ် ကူးကူးရေ တို့နဲ့များတခြားစီပဲ ..း))
တို့ကငါးမဖမ်းရဲဘူး အဲလိုအရှင်တွေဖလတ်ဖလတ်ခုန်နေရင် ပြေးရေား)))
ရူခင်းတွေက လှလိုက်တာ ကူးကူးရေ..ငါးမျှားချင်စိတ်တောင် ပေါက်တယ်..ငါးမျှားတိုင်းလည်း တကောင်မှ မမိဘူး..မြန်မာဝတ်စုံလေးက လှတယ်...
ငါးရှိတဲ့နေရာမှာမျှားလေလို့.... ပြီးတော့ သူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့အစာမှ ရတာ..း))
မဒမ်ကိုးရေ.. ကူးက ငါးတွေ့သိပ်ပျော်.. ကိုင်တော့သိပ်မကိုင်ရဲဘူး..
ငါးစာတို့.. ငါးမျှားတံက ဖြုတ်တာတော့သူများကိုခိုင်းရတာလေ..
ကိုယ်ကတော့ ငါးမျှားတံကိုင်ပြီး ငါးတွတ်ရင် ဆွဲရုံလောက်ဘဲ..း)
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ငါးလေးတွေ မွေးတယ်
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက လုံးဝမမျှတတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုဆိုတာ
သိလိုက်ရတော့ ...ဘယ်လောက်ဝါဿနာ ပါ ..ပါ မမွေးတော့ဘူး
ငါးဖမ်းတာလည်း ထိုနည်းတူပဲ ....
အမ က ရက်စက်တတ်တာပဲ...
သနားပါတယ် ငါးလေးတွေ မမျှားပါနဲ့လား မမ ရယ် တယောက်မမျှားတော့ လဲ ငါးလေးတွေအတွက် တယောက်စာဘေးကင်းတာပေါ့ ငါးလေးတွေဘယ်လောက်နာရှာမလဲနော်
ချစ်လဲချစ်တယ်... ၀ါသနာက ပါနေတော့ ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး။
နောက်ဆိုလဲ မမျှားဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။း)
အဲဒီရှုခင်း အလှဆုံးဘဲး))
ခဲ့ရတယ်။ ခုမျာားတော့ ဝေးနေပါပြီ
မှာမဟုတ်ဝူးဗျ ကိုယ်ခက်ခက်ခဲခဲ မျှားထား
ရတဲ့ ငါးကိုများ နှမြောစရာဗျာ တိတ်တိတ်
ဗမာတွေကတော့ ပုနေတဲ့သူတွေထက် နဲနဲသာတာနဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါ ရှည်လှပေါ့ ကြည့်ရတာ ဘုတ်ပွ ဂင်တိုထဲကပါပဲး)
ငယ်ငယ်က မျှားဖူးတယ် အရဿာရှိတယ် ဆိုတာလည်း ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ ငရဲကြီးမှာ ကြောက်လို့မမျှားတော့ဘူး။ ကြောက်တယ်ဗျ။